Torolàlana Hiantohana ny Fiarovana / Fahatoniana Niomerika ho an’ireo Afrikàna Mpiaro Tontolo Iainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2019 7:46 GMT
Misy torolàlana iray momba ny fahatoniana niomerika ikatsahana izay hanampiana ireo mpiaro ny zo momba ny tontolo iainana any Afrika atsimon'i Saharà, mba hiarovan'izy ireo ny tenany sy ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo. Noforonin'ny Tactical Technology Collective, fikambanana momba ny fanapariahambaovao sy ny fikatrohana, manana ny foibeny ao Berlin, ilay torolàlana narafitra avy aminà zotram-piarahamiasa tamin'ireo vondrona miasa anatin'io sehatra io any amin'ilay faritra.
Mihamafy ny tolona ho fanavotana ny tontolo iainana sy ny loharanonkarena iveloman'ireo vondrom-piarahamonina mahantra, miaraka amin'ny fihamaroan'ny fahitàna ireo tahirin-tsolika sy entona any amin'ireo faritra samihafa manerana an'i Afrika, ny fakàna tany homena ireo orinasa maro rantsana mpisehatra amin'ny fambolena ary ny fitomboan'ny asa fanorenana tohodrano goavana. Nahatratra ny haavo farany ambony ny famongarana ireo loharanonkarena hafa marobe sy ny fihazàna an-tsokosoko. Ao anatin'izany rehetra izany, iadian'ireo mpiaro tontolo iainana ny mba hanaovan'ireo orinasa sy ny governemanta tatitra amin'ny vahoakany, ary ny mba hiarovana ny maha-iray tsy mivaky ny firindran'ny zavaboahary.
Ireo tatitra navoakan'ny fikambanana, toy ny Global Witness, indrindra fa ilay tatitra “Dangerous Environment” (Tontolo mampididoza), dia mampiseho fitomboana be amin'ny resaka famonoana mpiaro tontolo iainana sy ny tany, nataon'ireo mpifanandrina amin-dry zareo eran'izao tontolo izao. Asehon'ilay tatitra fa avo telo heny ireo olona maty tamin'ny 2012 raha oharina amin'ny 10 taona tany aloha.
Miaraka amin'ny firoboroboana teknolojika sy ny fitomboana tsy mitsahatra amin'ny fampiasàna ireo fitaovana fisoloana vava ary fifandraisana niomerika mba ho entina manatontosa ny andraikiny, marefo dia marefo ireo mpiaro tontolo iainana ao Afrika miatrika ireo fanafihana sy ny sotasota an-tserasera. Ataon'ireo governamnata sy ireo orinasa lasibatra izy ireny, amin'ny alàlan'ireo tsy fahatomombanana tsikaritra amin'ny fiainana virtoalin-dry zareo.
Ho famaliana ireny fironana ireny, namoaka taridàlana iray ny Tactical Technology Collective mba hiantohana ny fahatoniana niomerika, taridàlana mitodika manokana amin'ireo mpiaro ny zo momba ny tontolo iainana.
Hatramin'ny 2012, niarahan'ny Tactical Tech niasa ireo mpiaro ny zo momba ny tontolo iainana ao Afrika mba hanampiana azy ireny hanamafy ny fahatoniana manodidina ny fitaovana niomerika ampiasainy. Mba handrafetana ny taridàlana momba “Ireo fitaovana sy tetika hananana fahatoniana niomerika ho an'ireo mpiaro ny zo momba ny tontolo iainana ao Afrika atsimon'i Saharà”, niaraka niasa taminà keniàna mpanoro hevitra amin'ny resaka fifandraisana momba ny tontolo iainana sy ny fahatoniana niomerika ny Tactical Tech. Avy eo ireo mpiaramiasa aminy dia nanomboka fanadihadiana iray hanombànana ny loza niomerika manontanona, ny kinanga, ny faharefoana sy ny fahafahan'ny olona kendreny ao Nizerià, Liberià, Tanzania, Kenia, Ogandà, RDC sy any amin'ireo firenena afrikàna hafa izay anaovan'ireo mpiaro tontolo iainana ny tolony tsy miato mba hiarovana ny tontolo amin'ny hatendan-kanin'ireo orinasa mpitrandraka harena an-kibon'ny tany.
Avy amin'ny fihanahan'ilay Security-in-a-Box, fitaovana fiarovana nataon'ny Tactical Tech ilay taridàlana, izay ilain'ireo mpiaro ny zo momba ny tontolo iainana efa hatry ny taona marobe. Izy io dia novolavolaina mba hitarika ireo mpikatroka manerana ireo dingana fiarovana ny loharano sy fitaovana niomerika ananan-dry zareo ary ireo rafitra fifanakalozana torohay mba hahafahan-dry zareo manentsina ny banga, izay mety ho ampiasain'ireo mpifanandrina aminy – ireo governemanta ry ireo orinasa – mba hanelingelenana ny asan-dry zareo, na hanohintohinana ara-batana azy ireo mihitsy.
Ireo lohahevitra voaresaka tao anatin'ilay taridàlana:
Fomba fanombanana ny kinanga amin'ny resaka fiarovana niomerika
Fomba fiarovana ny fiarahamiasanareo an-tambajotra
Fomba fampiasana ny finday avo lenta eny aminareo mba ho azo antoka tsara
Fomba fanaovana antso vonjy maika raha misy hamehana
Fomba fiarovana ny fijoroana vavolombelona
Raha te-hamaky misimisy kokoa momba izay voalaza dia ato miditra
Misy vakiteny voafetra ihany koa natonta ho an'ireo izay misafidy ny hamaky izany ambony takelaka hazo maty (taratasy)…
Raha toa ianao mahafantatra olona na tambajotra mety hahita ity resaka ity ho zava-mahaliana, dia zarao amin-dry zareo ity torohay / vaovao ity. Raha manana fanontaniana ianao, na maniry ny hahafantatra misimisy kokoa momba ilay taridàlana, manorata amin'i lisa [at] tacticaltech [dot] org na Maina [at] kijanimedia [dot] com.